Aya ndiwo marambiro matsva iPhone 13 kudonha nekuvhunduka | IPhone nhau
Isu tatoyambira kubva pakutanga (usati waenderera mberi nekuona chinyorwa ichi) kuti mifananidzo inogona kunzwira vazhinji venyu, asi hapana kana mavhidhiyo aya akagadzirwa kuti vasazeza mhando itsva dze iPhone 13. Iwo mavhidhiyo anotiratidza kuoma kwe ivo uye saka tinogona tarisa nemeso edu pachega kuramba kushamiswa uye kudonha kwetsaona.
Mune ino kesi, vhidhiyo yekutanga yatinozogovana nayo inowedzerawo kuenzanisa maererano nekupokana pakati peiyo iPhone 13 uye Samsung Galaxy S21. Pasina kupokana mavhidhiyo anoenda kupfuura kutyora iPhone kana Samsung nekuda kwekuti Izvo zvakagadzirirwa kuratidza kushomeka chaiko kwezvinhu izvi zvitsva.
Yokutanga ndeye Vhidhiyo yefoniBuff umo mavanofananidza kudonha kuramba pakati peiyo nyowani iPhone 13 uye iyo Samsung Galaxy S21 Ultra:
Uye kupedzisa imwe vhidhiyo yeanonyatso kuzivikanwa youtuber EveryThingApplePro:
Tinofanira kuziva izvozvo mavhidhiyo ese ari maviri anogona kurwadza kune Apple uye Samsung vashandisiAya ndiwo marongero ane mutengo wakakwira uye zvinorwadza kuona kuti vanodambura sei kudonha kwakanyatsokonzera. Kune rimwe divi, zvinonyanya kufadza kuona nemavhidhiyo aya kushorwa kungave new Apple mafoni. Ichi chinhu chakaratidzwa pamwe nekusimbiswa kwakawanda muchiitiko chekuratidzira uye mushure mekuona mavhidhiyo zvinoita sekunge iwo anopokana.
Iye zvino zvatiri kuona aya mavhidhiyo, iyo kutsungirira miedzo yeApple Watch Series 7, iyo Apple yakazvirumbidzawo zvakanyanya mukuratidzira kwayo. Iwe uchafanirwa kuona aya mavhidhiyo kana paine YouTuber anovaparidzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 13 » Aya ndiwo marambiro matsva iPhone 13 kudonha nekuvhunduka